Mafana ve ny finday ary ahoana no manamboatra azy | Androidsis
Maninona no mafana ny finday ary ahoana ny fanamboarana azy
Ignacio Sala | 21/06/2021 22:00 | bateria, Tutorials
Mihoatra ny mahazatra ny fahitana azy mafana ny finday avoakanay betsaka amin'ny fahavaratra, mihoatra ny mahazatra. Na izany aza, ny fanafanana ny findaintsika finday dia tsy mifandray matetika amin'ity vanim-potoana ity, satria tsy olana amin'ny vanim-potoana amin'ny taona fotsiny io.
Misy antony maromaro misy fiantraikany amin'ny fanafanana, na tsia, ny terminal misy antsika. Raha te hahita ianao inona ny antony mahatonga ny fanafanana fa mijaly ny terminal anao ary ahoana no hamahanao, Manasa anao hanohy hamaky ity lahatsoratra manaraka ity aho.
1 Masoandro mivantana
2 Antony iarovana ny tontolo iainana
3 Mametraka ny terminal
4 Lalao mitaky
5 Milalao atiny multimedia
6 Seho mandritra ny fotoana maharitra
7 Lahatsary fanodinana
8 Makà sary sy fandraketana horonantsary
9 Olana amin'ny hardware
10 Fampiharana ambadika
Ny hafanana Tsy namana amin'ny fitaovana elektronika rehetra. Ny fitaovana elektronika rehetra dia natao hijanona tsy hiasa rehefa tonga amin'ny maripana iray izy ireo hanakanana ilay fitaovana tsy hiasa mandrakizay.
Raha navelanao tamin'ny alàlan'ny masoandro ny finday avo lenta, indrindra amin'ny fahavaratra, dia azo inoana fa tsy hoe may fotsiny izy io, fa koa tsy mandeha ny efijery ny terminal anao na mampiseho hafatra mampandre anay ny hafanan'ny terminal be loatra.
Tsy maintsy misoroka faran'izay betsaka araka izay tratra isika, mamela ny finday avo lenta finday amin'ny masoandro, indrindra amin'ny fahavaratra sy na dia mandritra ny fotoana fohy aza. Raha toa ka tratry ny masoandro mivantana ny terminal antsika ary tsy mandeha izy dia mila miandry fotsiny isika mba hangatsiaka azy vao ho velona indray.
Antony iarovana ny tontolo iainana
Ny hafanana dia singa iray hafa izay mitombo ny hafanan'ny terminal-nay. Rahoviana ny mari-pana momba ny tontolo iainana dia mihoatra ny 30 degre, Mora ho an'ny terminal ny mijaly, tsy manomboka mandeha tsara izy io na dia tsy manao dingana mitaky ny herin'ny fitaovana aza isika.
Amin'ireny tranga ireny, raha mila manohy mampiasa azy isika, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny esory amin'ny tranga izy io ary ampiasao izany raha tsy misy ilainay indray.
Mametraka ny terminal
Amin'ny ambaratonga lehibe kokoa na ambany kokoa, mamaivay ny terminal rehetra rehefa voampanga. Na izany aza, tsikaritray fa ny hafanana bebe kokoa amin'ny fahavaratra, indrindra rehefa mampiasa rafitra fikirakirana tsy misy tariby. Ny charger tsy misy tariby dia mafana mandritra ny dingan'ny famahanana, hafanana ampitaina amin'ilay fitaovana.
Raha mifoha maraina ianao ary mahita ny fomba tsy mbola fenoina tanteraka ny fitaovanao, dia satria nijanona tampoka ny famoahana terminal ny terminal. hafanana be loatra avy amin'ny fotony famahanana. Amin'ity lafiny ity, ny zavatra tsara indrindra mandritra ny volana mafana dia ny fampiasana charger misy tariby.
Ny filalaovana Solitaire amin'ny findainao finday dia tsy mitovy amin'ny filalaovana lalao izany mitaky ny herin'ny smartphone rehetra. Ny lalao mitaky be indrindra, toy ny Fortnite, PUBG, Call of Duty, Asphalt 9 ... dia ny lalao izay mametraka ny fikirakira ny processeur hatramin'ny farany, ka na ho ela na ho haingana dia miafara amin'ny fanafanana ny finday avo lenta.
Fa ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fametahana ny zotra amin'ny farany avo indrindra koa mandany bateria be dia be izy ireo. Vahaolana tena izy ho an'ity olana ity, tsy misy izany. Raha tianao ireo lalao ireo dia tsy hiteny aminao izahay mba tsy hilalao. Ny hany zavatra azonao atao hisorohana azy tsy hihafana noho ny tokony ho izy dia ny tsy fananan'ny fitaovana mametaka azy rehefa milalao isika.
Milalao atiny multimedia
Ity fizarana ity dia misy ifandraisany amin'ilay iray teo aloha. Ny playback amin'ny media dia singa iray hafa mametraka ny be indrindra ny fiasan'ny processeur anay, indrindra rehefa tsy atiny YouTube ireo rakitra ataontsika (noho ny codec ampiasainy).
Seho mandritra ny fotoana maharitra
Manokana ahy hatrizay tsy te hampiasa finday avo lenta toy ny navigateur GPS. Raha ny amin'ny adiresy iray, 99% amin'ny fotoana, dia fantatro ny làlambe lehibe, ka tsy ampiasaiko izany rehefa efa eto an-tanàna aho.
Ny efijery dia iray amin'ireo singa mandany bateria betsaka indrindra ao amin'ny terminal. Ho fanampin'izay, dia singa iray hafa izay misy fiantraikany amin'ny hafanan'ny fitaovana. Raha araka izay azo atao dia ampiasao ihany ny fitetezana rehefa ao an-tanàna misy ny adiresy tianao hotsidihina fa tsy mandritra ny dia an-dàlana.
Amin'ny vidin'ny efijery dia mila ampiana ny fitohizan'ny fampiasana GPS mba hahafantaran'ilay rindranasa amin'ny fotoana rehetra tokony hametrahantsika ny tenantsika amin'ny sarintany sy hanolorana antsika ireo lalana tena marina hahatratrarantsika ny toerana halehantsika.
Ny iray amin'ireo fizotrany izay mampiasa be mpampiasa ny processeur an'ny fitaovantsika ary, noho izany, misy fiantraikany amin'ny hafanan'ny fitaovana, dia ny fanodinana horonantsary. Raha mampiasa finday avo lenta amin'ny alàlan'ny fanovana horonantsary izahay, raha tena lava be izy ireo, dia miakatra ny hafanana.
Isaky ny afaka manao izany isika dia tsara ny manao ireo asa fanovana ireo amin'ny fomba milamina manoloana solosaina. Raha tsy azo atao izany noho ny tsy fahampian'ny vola dia afaka miandry ny mari-pana manodidina ny ambany 30 degre isika.
Makà sary sy fandraketana horonantsary
Raha manomboka mandrakitra horonantsary lava isika na maka sary marobe ao anatin'ny fotoana fohy dia hiafara amin'ny hafana ny terminal anay. Ny antony dia tsy iza fa ny fampiasana processeur vita amin'ny fakan-tsary rehetra mba hanitsiana ireo sary nalaina tamin'ny masontsivana izay efa nalaminao.
Isaky ny azo atao dia tokony ataovy fitsaharana amin'ity karazana toe-javatra ity ny finday avo lenta. Mazava ho azy, raha hetsika manokana tiantsika hotanana io dia tsy hisy na inona na inona hitranga amin'ny terminal antsika raha miseho mandritra ny fotoana fohy.
Olana amin'ny hardware
Tsy hoe izaho no manana mania manokana ho an'ny terminal aziatika misy marika tsy dia fantatra, fa mifototra amin'ny zavatra niainako dia afaka nanamarina aho hoe manao ahoana ny hafanan'ny ankamaroan'ireto terminal ireto amin'ny alàlan'ny fanaovana hetsika, na ny fitetezana Internet, ny fanamarinana ny mailaka ... ireo asa izay tsy mitaky herinaratra avy amin'ny terminal.
Raha manana terminal Aziatika ianao avy amin'ny marika izay olona vitsy no mahalala, aza manahy, zavatra mahazatra izany. Rehefa mihoampampana ny terminal dia mihena be ny ain'ny bateria. Raha azonao atao ny misoroka ny fividianana ireo fitaovana ireo amin'ny ho avy, na mora toy inona aza izy ireo, dia tsara kokoa. Tsy misy vahaolana hafa momba an'io olana io.
Raha mafana ny terminal anao ary tsy misy amin'ireo safidy samihafa nasehoko anao etsy ambony dia mifandraika amin'ny fampiasana anao amin'ny terminal anao, tokony hijery ny fampiharana mihodina ao aoriana.
Raha, ankoatry ny fanafanana be loatra, dia voamarikao ny fomba ny bateria dia mandeha amin'ny fomba tsy mahazatra, Ny zava-drehetra dia manondro fa misy ny rindranasa ao ambadika izay miteraka olana amin'ny fitaovanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Maninona no mafana ny finday ary ahoana ny fanamboarana azy
Ny sary tsara indrindra ho an'ny Android anao
Ny fampiharana zaza 5 tsara indrindra ho an'ny Android